Otomaatiga iyo Shakhsiyeynta Suuqgeynta Dijitaalka ah | Martech Zone
Otomaatiga iyo Shakhsiyeynta Suuqgeynta Digital
Waxaan hadda ku dhajinay faahfaahin muuqaal ah Suuqgeynta Dadweynaha iyo Shakhsiyeynta taasi oo kahadashay faa iidooyinka isgaarsiinta shaqsiga ah marka loo eego dufcadda iyo suuq geynta qaabka qaraxa. Pardot wuxuu soo saaray infographic soo socda oo uu kula hadlayo Qalabaynta Suuqgeynta iyo Shakhsiyeynta.
Si loogu guuleysto suuqa maanta dadku ku badan yahay, suuqleyda waxay u baahan yihiin inay shakhsiyeeyaan suuqgeynta iyo khibradaha websaydhka macaamiishooda iyo rajooyinka iibka si isku mid ah. Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay a daraasad cusub oo ka socota Econsultancy, Qaar badan oo suuqley ah ayaa la halgamaya sidii ay ugu hirgelin lahaayeen shaqsiyaysiinta dadaalkooda suuq geynta dijitaalka ah.
Mid ka mid ah walxaha wanaagsan ee nidaamka otomaatiga suuq geynta ayaa ah awooda lagu soo ururin karo xogta tooska laga qabo rajada iyo sidoo kale in la soo qabto dhaqankooda waqti kadib. Shakhsiyeyntii hore ee shaqsiyeed waxay ubaahantahay qabashada foom ballaaran oo leh heerar ka tagis badan. Adoo ka faa'iideysanaya otomaatiga suuq geynta, waxaad si tartiib tartiib ah u soo qabsan kartaa xogta oo aad u sii wadi kartaa inaad si fiican u hagaajiso ololahaaga, taasoo ka dhigeysa inay ku habboon yihiin rajada markaad wax badan ka barato Tani waxay yareynaysaa ka tagida waxayna kordhineysaa sicirka beddelashada.
Tags: suuq-geynta suuqaisgaarsiinta suuqgeyntacafisshakhsi ahaaneed
Viewbix: Ka dhig Fiidiyowyadaada Youtube dhexgal
Waa maxay sababta Fiidiyowyadaada Ganacsi ay ugu habboon yihiin Vimeo